Tsy natao handamina ny disadisan’ny mpivady ny zanaka !
Harena, sombin’ny aina, mpandova, rehareha… Ireo no anoritantsika Malagasy ny zanaka. Indraindray anefa, ao ambadik’ireo, dia ataontsika fitaovana izy ireny, ialokalofana sy atao ala-olana, indrindra rehefa misy olana ao an-tokantrano.
Be dia be ny endrika hisehoan’izany, izay tsy eritreretintsika akory. Saingy mety hisy akony ratsy amin’ny toe-tsain’izy ireo izany, no sady tsy voatery hahazo ny vokatra tadiavina akory isika…
Tsy itazonana lehilahy efa te hisaraka
Vao tsy mivady akory ny mpifankatia sasany, dia efa manao ny zanaka, izay mbola tsy misy akory, ho fitaovana. Ny vehivavy no tena mpampiasa ity tetikady ity : manao izay hahabevohoka, mba hitazonana ny lehilahy tsy hisaraka aminy. Mety hisy tokoa ny lehilahy tsy mitsoaka adidy sy andraikitra, ka mijanona eo amin’ilay vehivavy bevohokany, na dia efa tsy misy intsony aza ny fitiavana. Saingy amin’ny ankapobeny, mitaty ny vokatr’izany ireny vehivavy ireny, rehefa tonga ao an-tokantrano. Miainga ao amin’izay mantsy ny valifatin’ny lehilahy : vono, fampirafesana… Raha fiadanana sy hasambarana no notetehina, dia vao mainka fahoriana no iainana. Tsy voatery hanaiky hijanona koa anefa ilay lehilahy nahabevohoka, fa mety hitsoaka izy, na koa ilay zanaka fotsiny no raisiny ho adidy, fa izy akory tsy hanambady an’ilay vehivavy.
Tsy manova ny toetra ratsin’ny lehilahy
Rehefa tonga ao an-tokantrano dia mbola misy ireo mihevitra, fa ny fiterahana no mety hamaha ny olana sy ny disadisa misy eo amin’ny mpivady. Misy, noho izany, ireo misafidy ny hiteraka, na ny hiteraka indray, sao izany no hampitony an’ilay lehilahy, hanakana azy tsy “hihodina”, hahatamana azy ao an-trano, handrisika azy hampidi-bola bebe kokoa… Mety ho hevitra mety izany, raha tena zava-dehibe amin’ilay lehilahy ny manan-janaka. Saingy ny fiterahana dia tokony hifanarahan’ny olon-droa, mba tsy hifanomezan-tsiny. Tokony ho samy vonona hitaiza, hamelona sy hikolokolo mantsy ny olona roa, vao miroso amin’izany. Raha tsy vonona akory ilay lehilahy, dia mety hifanohitra amin’izay andrasana aza no mitranga : vao mainka izy hitady vehivavy hafa, satria tsy hanam-potoana loatra hikarakarana azy ianao rehefa sahirana amin’ny zazakely ; leo ny manolo tatin-jaza sy ny tomany izy, dia hitady lalana hivoahana foana… Tsy vahaolana mihitsy izany ny miteraka, fa aleo aloha vahana hatrany amin’ny fakany ny olana misy. Rehefa milamina tsara, izay vao mametraka zaza.
Tsy fanaovana “chantage” rehefa hisaraka
Ny zaza fito, hono, tsy mahafehy trano, nefa indraindray, misy mihevitra fa rehefa eo ny zanaka, dia voaaro amin’ny fisaraham-panambadiana ny tokantrano. Ireo zaza mihitsy aza no atao fitaovana, hanambazana (chantage) na handrahonana an’ilay vady, mba tsy hisaraka. Isan’izany ny fitenenana hoe : “tsy ho hitanao intsony ireo zaza ireo raha mivoaka ny varavarana eo ianao !”. Indraindray koa, matahotra zavatra miandry isika, raha tena misaraka tokoa, hany ka ireo ankizy no ialokalofana : “Raha tsy nisy ireo zaza ireo dia efa nilaozako ianao !”. Adinontsika, fa tsy misy hidiran’ny ankizy mihitsy ny fanambadian’ny ray sy reniny. Olon-droa no nifanaraka ny hivady, olon-droa koa izany no tokony hifampiraharaha rehefa hisaraka. Marina mihitsy, fa tsy maintsy tsinjovina ny ankizy, saingy tsy misy hidiran’izy ireo ny resaka tokantrano. Azon’ny ray sy reny atao tsara rahateo ny manao ny adidiny amin-janany, na misaraka aza izy ireo, fa tsy tokony alatsaka eo anelanelany ny ankizy. Sady tsy mahamenatra rahateo ve izany hoe : ny zaza tsy manan-tsiny no iafenanana sy ialokalofan’ny olon-dehibe ?!